ထိပ်တန်း 10 Linkedin စာမျက်နှာများဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်ရရန် | အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေး - ခရီးသွားလာရေးအတွက်လမ်းညွှန်
ထိပ်တန်း 10 LinkedIn စာမျက်နှာများဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အ Get စေရန်, ဤဆောင်းပါး၌, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ LinkedIn အပေါ်ကိုလိုက်နာဖို့အကောင်းဆုံးစာမျက်နှာများတွင်နေရာ ဒူဘိုင်း, ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရရန်။
ဖြစ်လာ social media platform များ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့၏အလွန်လူကြိုက်များလမ်း။ ထိုအကြှနျုပျတို့ရှိသမြှကိုသိနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာလူအများစု LinkedIn တို့အသုံးပြုနေသည်အဖြစ် အလုပ်အကိုင်အဆိုဒ်များအလုပ်တစ်ခုရဖို့။
မကြာသေးမီက ဒီပလက်ဖောင်း update လုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲထားပါတယ် ကျွန်တော်တစ်ဦးအနှစ်မတိုင်မီဒီကုမ္ပဏီနှိုင်းယှဉ်ပါလျှင်၎င်းတို့၏အလုပ်တစ်ခုမှာပိုမိုလွယ်ကူသည်အဘယ်မှာရှိ။ ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော သငျသညျယူနိုက်တက်အာရပ်စော်ဘွားတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ရှာနေလျှင် သင်ပထမဦးဆုံးမှာ LinkedIn တို့အတွက်အနည်းငယ်ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာများကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်။
ဒါဟာကျိန်းသေသငျသညျအနည်းဆုံးအတော်လေးဥာဏ်ကောင်းသောအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါမည် ယခုအချိန်တွင်ငှားရမ်းသူ, သင်တန်း, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအောက်တွင်ပေးကြသည်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်သင့်ရဲ့ updated အလုပ်ထွက်ပေါက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
အဆိုပါ CareerDubai.net LinkedIn စာမျက်နှာဦးဆောင်ဒေသခံတဦးဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်များ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရှာဖွေနေကြသူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြည်တော်ပြန်စိတ်ဝင်စားစရာပရိုဖိုင်းရှိခြင်း ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်.
အလုပ်ရှာဖွေရေး Dubai.net မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်ဖို့စီမံခန့်ခွဲ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအချို့ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်မှ။ သို့သော်ကုမ္ပဏီ 2004 ကတည်းကအပေါငျးတို့သဒူဘိုင်းစုဆောင်းမှုကဏ္ဍကျော်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ဘယ်လိုလူသိများစကားပြော အသစ်တစ်ခုကိုအလုပ်ရှင်များအတွက်စုဆောင်းမှုရလဒ်များကို။
ဒီကုမ္ပဏီ၏မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် ကျွမ်းကျင်သူများကိုကူညီ နှင့်ဒေသခံဖောက်သည်အရင်းအမြစ်အားဖြင့်၎င်း, ယူအေအီးအတွက်အများဆုံးအရည်အချင်းပြည့်မီပညာရှင်များကိုငှားရမ်း။
အဆိုပါ Boyen Haddin တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် မွမ်ဘိုင်းကနေဝန်ထမ်းများနှင့်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေးအဖှဲ့အစညျး, Maharastra နှင့် LinkedIn အပေါ် 250,039 နောက်လိုက်ကျော်ရှိခြင်း။ ဒါကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီလူမှုရေးအရအထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကုမ္ပဏီ တစ်ဦးစုဆောင်းမှုစစ်ဆင်ရေး running ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ပေး။
Boyen Haddin ယင်းနှင့်အတူအကျင့်ကိုကျင့် အိန္ဒိယနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများမှ။ ဒါကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီများကထောက်ပံ့ပေးအလုပ်အခွင့်အလမ်းများသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များတွင်ဖြစ်ကြသည်။ ကုမ္ပဏီအထူးပြု ဒူဘိုင်းတွင်အကြီးတန်းအဆင့်အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေးအတွက်။ ထို့အပြင်ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သင်ဘုတ်အဖွဲ့အတိုင်ပင်ခံရနိုင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်ဒါရိုက်တာရာထူးကိုအဖြစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအနေအထား။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအထူးအာရုံစိုက်နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်မှထိတွေ့မှုမြင့်မားလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ Boyen Haddin ကုမ္ပဏီနှင့်အတူမြင့်မားကျွမ်းကျင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မန်နေဂျာလျှင်သို့သော်သင်အမှန်တကယ်သွယ်ဝိုက်သငျသညျကိုဆက်သွယ်မှအလုပ်ရှင်များကို enable နိုင်ပါတယ်။
စော်ဘွား လေကြောင်းလိုင်း / လေကြောင်းဆိုင်ရာ
အဆိုပါစော်ဘွားကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအခြေစိုက်။ သို့သော်အပြည့်အဝကုမ္ပဏီအမည်ကိုတစ်ခုစော်ဘွား Group မှဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါကုမ္ပဏီ 103,363 တိုင်းရင်းသားတွေထက်ပိုပြီးထံမှ 160 န်ထမ်းကိုကျော်န်ထမ်း။ ဒါကအထင်ကြီးထက်ပို။ updated အလုပ်အကိုင်များပို့စ်တင်အဆိုပါကုမ္ပဏီ LinkedIn စာမျက်နှာပေါ်တွင်မကြာခဏပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်သေချာထိုသို့ LinkedIn အပေါ်နောက်လိုက်ဖို့ကျိုးနပ်သည်။
အဆိုပါစော်ဘွား Group ၏ ကျယ်ပြန့် HR အဖွဲ့ရှိခြင်း။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ထံမှစုဆောင်းနေကြသည်။ ထိုလမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီမတူကွဲပြား အိန္ဒိယကနေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတောင်အာဖရိကနှင့်ပင်အမေရိကန်ကနေ
မြေတပြင်လုံးအုပ်စုတစ်စုအစုစုကိုကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းဟာစော်ဘွားများပါဝင်သည် Emirates ။ နှင့်သင်တန်း၏, သူတို့၏အလုပ်အကိုင်အားလုံးကမ်းလှမ်းမှု LinkedIn တို့ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ပရိုဖိုင်းက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် Group ၏ဆက်ကပ်အပ်နှံအလုပ်အကိုင်များက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ် emirates.com/careers
LinkedIn စာမျက်နှာဖြစ်ပါသည်ဒူဘိုင်းလေဆိပ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့အတိုင်းလိုက်နာရန်နောက်ထပ်စမတ်စိတ်ကူး။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဌာနတွေအများကြီးစီမံခန့်ခွဲ။ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံတကာ (DXB) ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပမာ။
နှင့်သင်တန်းဒူဘိုင်းနိုင်ငံတကာ (DXB) ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည်။ သူတို့ကအမှန်တကယ်ရှိပါတယ် န်ထမ်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ငှားရမ်း။ သို့သော်၎င်းတို့၏ LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းစာမျက်နှာကိုအောက်ပါသင်ဥပမာအခြားအလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုအဖြစ်ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားဗဟို (DWC) အကြောင်းကြားပါလိမ့်မည် - ကမ္ဘာရဲ့အနာဂတ်အချက်အချာ။
ကောင်းပြီ, ဒူဘိုင်းလေဆိပ် ဝန်ထမ်းအတော်လေးခက်ခဲအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ် ဖောက်သည်များအတွက်ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းအတှေ့အကွုံကယ်နှုတ်တော်မူရန်။ ဒါကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီများကထောက်ပံ့ပေးအလုပ်အကိုင်များတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ် လုံခြုံရေးအစောင့်ဒါမှမဟုတ် ခေါ်ဆိုခစင်တာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမန်နေဂျာ။ နှင့်သင့်တာဝန်များကို secure နှင့်လေဆိပ်တစ်ခုထိရောက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Majid အယ်လ် Futtaim Holding
ဒါကကုမ္ပဏီဟောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်သို့သော်စူပါအစာရှောင်ပေါက်နေသည်။ ကုမ္ပဏီ Majid အယ်လ် Futtaim ၏နာမတော်အောက်တွင် 1992 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. တစ်ဦးဖြစ်လာ လူသိများတဲ့အဖွဲ့အစည်းကအရှေ့အလယ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောစျေးဝယ်ကုန်တိုက်ဦးဆောင်အဖြစ်အလုပ်ရနိုင်, HR အတွက်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်မူဝါဒများအောက်မှာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးလက်လီဌာနများတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပင်စီမံခန့်ခွဲ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးအပန်းဖြေစင်တာများ, အာဖရိကနှင့်အာရှတိုက်။ ဒူဘိုင်း၌ဤအဖှဲ့အစညျးနှငျ့ဤမျှလောက်အာကာသရှိပါသည်။
Emaar နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒူဘိုင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 1997 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အများအပြားကဏ္ဍများအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း, ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီစျေးဝယ် Mall ။ ထိုမှတပါး, သငျသညျတခုစီးပွားဖြစ်ငှားရမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူရွေးချယ်စရာအဖြစ် Entertainment ကရှိနိုင်ပြီး, ဒူဘိုင်းအိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးရေးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ LinkedIn ပေါ်နှင့် 563,914 ကျော် 20 နောက်လိုက်ထက်ပိုရှိပါတယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တော်ပြန်များအတွက်ရရှိနိုင်အလုပ်အကိုင်များ။ သငျသညျစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြနှင့်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်ဒါ Emaar အိမ်ခြံမြေနှင့်အတူအသစ်ရဲ့အနာဂတ်တည်ဆောက်နိုင်ပါ။
သင်တို့သည်လည်းဒူဘိုင်းအတွက်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 များအတွက်တရားဝင် LinkedIn တို့ရုပ်သံလိုင်းကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းအစိုးရ အစဉ်အမြဲအသစ်အအလုပ်အကိုင်များဖြည့်စွက်ဤချန်နယ်ပေးထားပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအလယ်တန်းမန်နေဂျာသို့မဟုတ်အကြီးတန်းမန်နေဂျာအဖြစ်ဒေသတွင်းမှကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲဆောင်ကြဉ်းနိုင်ပါလိမ့်မည်သကဲ့သို့, ကုန်စည်ပြပွဲလိုက်နာပါ။
ကုန်စည်ပြပွဲထိပ် 10 LinkedIn အကြားအခြား LinkedIn စာမျက်နှာ စာမကျြနှာဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်။ ဒီတော့ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အသငျသညျကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်မတိုင်မီဤစီမံကိန်းအဘို့သင့် application ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
Emaar ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း Group မှ
အဆိုပါ Emaar ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း Group သည်တဦးဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အဦးဆောင်အလုပ်ရှင်များ။ ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Emaar Properties ကို PJSC တစ်လုံးလုံးပိုင်လက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ်။ LinkedIn အပေါ်သူတို့ကရှေ့တော်မှောက်ရုံထက်ပိုနေတဲ့စံလမ်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သို့သော်ဤအဖွဲ့အစည်းများထဲမှအထဲမှာ ဒူဘိုင်းတွင်ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးအိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးမှုကုမ္ပဏီများမှ.
Emaar အတူအလုပ်အကိုင်အရယူခြင်း, ကံမကောင်းလိုအပ် သင့်ရဲ့အခြမ်းကနေသက်သေအရည်အသွေးနှင့်အတူထောက်ပြခံရဖို့ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း။ နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, သင်ကောင်းစွာသို့မဟုတ်ဧညျ့နှင့်အပန်းဖြေအဖြစ်ကုန်တိုက်ကြီးတွေနဲ့လက်လီအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံရှိသည်သငျ့သညျ။ ဒါကကျိန်းသေသင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အင်တာဗျူးရဖို့ကူညီကြမည် ကျေး Emaar HR မန်နေဂျာ။
အဆိုပါ Emaar ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း Group မှလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှနိုင်ငံခြားသားများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ငှားရမ်းထားပါသည်။ နှင့်၎င်း၏ လိုအပ်ချက်များကိုငှားရမ်းနေဆဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့အကြီးထွားလာနေကြတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်အလုပ်ရရန်ရှာဖွေနေလျှင် သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံး option ကိုအဖြစ်ဥရောပတစ်ဦးဦးတည်ရာကိုရှေးခယျြသငျ့သညျ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အရှေ့အလယ်ပိုင်းထိုကဲ့သို့သောဒါရိုက်တာများနှင့် CFO အဖြစ်အကြီးတန်းမန်နေဂျာအခန်းကဏ္ဍများအတွက်မန်နေဂျာနှင့်အိန္ဒိယတို့အတွက်အများကြီးပိုပါတယ်။ သို့သော် Emaar ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း Group မှယခုကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ဒူဘိုင်း၏တရားဝင်ဟိုတယ်နှင့်ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်း Partner ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ADNOC Group မှကုမ္ပဏီအဘူဒါဘီအတွက် 1971 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ သူတို့ကအစ LinkedIn အတွင်းပထမဆုံးကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်းဖြစ်လာသည်။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည် အမျိုးသားရေးရေနံကုမ္ပဏီအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ တစ်ဦးအင်ဂျင်နီယာချုပ်အဖြစ်သို့မဟုတ်သင်ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဌာနအဖြစ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းလျှင်နောက်လိုက်ဖို့ A ကောင်းဆုံး LinkedIn တို့စာမျက်နှာ။
ADNOC ၏တစျခုဖွစျသညျ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကမ္ဘာ့ဦးဆောင်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သူများ။ ကူဝိတ်နဲ့ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားပုံစံနှင့်ပင်ကနေဒါနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်မန်နေဂျာများ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ 45 နှစ်ကျော်ကအဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါသမိုင်း, ADNOC တဖြည်းဖြည်းနှစ်ပေါင်းများစွာစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ နှင့် ထိုကုမ္ပဏီ၏ဂုဏ်သတင်းက၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးထက်ပိုမိုချဲ့ထွင်နေသည်.
ဒါကအဖွဲ့အစည်းကတစ်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍတွင်ထက်ပို 18 ကုမ္ပဏီများနှင့်လုပ်ငန်းခွဲများပါဝင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်, သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာနေလျှင် သငျသညျသေချာဘို့ ADNOC ကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း LinkedIn အပေါ်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်နှင့်၎င်းတို့၏ updates များကိုအတိုင်းလိုက်နာရန်ဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းရှိပေါင်းစည်းရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အလုပ်အကိုင်များသည်။ ဒါ့အပြင်တူးဖော်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်ရေး, သန့်စင်, ရေနံဓာတုနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့ hashtags ကိုထည့်ပါ။
အဘူဒါဘီကနေအကောင်းဆုံးလေကြောင်းလိုင်း / လေကြောင်းကုမ္ပဏီ။ သေချာဘို့ဤကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ကောင်းစွာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လူသိများ။ Etihad လေကြောင်းလိုင်းဟာအောက်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကအစိုးရလည်ပတ်နေသည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဥပဒေနှင့်မူဝါဒများ.
ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖြစ်ဒေသခံအလုပ်ရှာဖွေသူများမှကြိုဆိုကြသည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏အမျိုးသားရေးလေကြောင်းလိုင်းလျှောက်ထား။ Etihad နီးပါးနေ့တိုင်းကျွမ်းကျင်သူများငှားရမ်းသည်။ သငျသညျဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်တစ်ပျံသန်းဌာနများတွင်အလုပ်ရနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤကုမ္ပဏီလည်းအင်ဂျင်နီယာဌာနနှင့်ရုံးဌာနများတွင်အများအပြားရာထူးရှိပါတယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီလာ တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားလမ်းရှေ့တော်၌ထိုအကောင်းဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်တစ်ဦးအဖြစ်တက်ရပ်။ သူတို့ခရီး၏ beginig ကတည်းကကောင်းစွာတိုက်ခြင်း။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကုမ္ပဏီ 2003 အတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. အကြီးအောင်မြင်မှုများလုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ကောင်းသောအချက်မန်နေဂျာအစဉ်အဆက်ခရီးသည်သန်းပေါင်းများစွာရက်ပေါင်းနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စွန့်စားမှုဝေမျှနိုင်ပါပြီမှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအသေချာများအတွက် ထိုကဲ့သို့သောယှဉ်ပြိုင်ဌာနများအတွက်အလုပ်အနေဖြင့်ကျေနပ်မှုရ။
ကောက်ချက် - ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အ Get ရန်ထိပ်တန်း 10 LinkedIn စာမျက်နှာများ
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်း 10 LinkedIn စာမျက်နှာများကိုအောက်ပါတို့က ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်။ အဖြေသင်ပြုရန်ရှိသည်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာများကိုဖွင့် click နဲ့နောက်ကိုလိုက်နေသည်, ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာကဤ အဖွဲ့အစည်းများအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုပို့စ်တင်ထားပါသည် သင်သည်သင်၏ LinkedIn ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါစမတ်လမ်းဖွင့်တဲ့ hashtag ကိုလိုက်နာနှင့်၎င်းတို့၏ add ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှုနှင့်ငှားရမ်း.
linkedin ဖြစ်ပါသည် အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းတဦး။ တစ်အချက်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင်အလုပ်ရှာဖွေနေရည်ရွယ်ချက်များအဘို့သင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာပရိုဖိုင်းကို အသုံးပြု. ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ငါတို့သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအကြောင်းပြောနေတာပါက။ linkedin ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာစူပါရေပန်းစားသည်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူ ငါတို့သည်သင်တို့ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ရှာဖွေနေတဲ့အလားအလာအလုပ်လိုကြသည်.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအတွက်ဂျော့ဘ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသငျသညျယခုတှငျအလမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရနိုင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။